उडिरहेको विमानका पाइलटलाई एक्कासी हृदयघात भएपछि - nayakhoj24.com
उडिरहेको विमानका पाइलटलाई एक्कासी हृदयघात भएपछि
प्रकाशित मिती: June 27, 2018 | naya khoj पढ्न:0मिनेट
एजेन्सी ! उडिरहेको विमानमा पाइलटलाई अकस्मात हृदयघात भए के होला ! धेरैको मनमा यो प्रश्नको जवाफमा सम्भावित दुर्घटना अंकित हुन्छ । तर इन्डिगो एयरलाइन्सको एक विमानमा मुख्य पाइलटलाई उडानकै बीच हृदयघात भए पनि सामान्य ढंगले नै विमानलाई अवतरण गराएर सम्भावित दुर्घटना टारिएको छ ।
समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार इम्फालबाट कोलकाता आउँदै गरेको विमानमा पाइलटलाई हृदयघात भएको थियो । क्युवा मुलका ६३ वर्षीय पाइलट सिल्भियो डियाज अकोस्टालाई उडानकै क्रममा हृदयघात भएको हो ।
कोलकाता नजिकैको आकाशमा आइपुगेको अवस्थामा उनलाई हृदयघात भएको बताइन्छ । अवतरणको तयारी गरिरहँदा उनले आफ्नो को–पाइलटलाई छाती दुख्न थालेको जानकारी गराएका थिए । विस्तारै उनको छातीमा दुखाइ बढ्दै गयो र शरीर पसिनाले भिज्न थाल्यो ।
विमानस्थल स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचारमाध्यमले जनाएअनुसार छातीको पीडालाई झेल्दै ती पाइलटले आफ्नो को–पाइलटको सहयोगमा विमानलाई सुरक्षित अवतरण गराएका थिए । अवतरण लगत्तै उनलाई विमानस्थलको चिकित्सकीय युनिटमा लगिएको थियो । ईसिजी रिपोर्टअनुसार पाइलट अकोस्टाको अवस्था निकै गम्भीर पाइएको थियो । लगत्तै उनलाई अस्पताल भर्ना गरियो ।
कार्डियोलोजिस्ट डा. सत्रजीत समन्ताका अनुसार पाइलट अकोस्टालाई तत्कालै आकस्मिक कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो । उनलाई हृदयघातका कारण छातीमा पीडा भएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । मुटुमा जाने नसामा रक्तप्रवाह निकै कम या पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा यस्तो समस्या आउने चिकित्सकको भनाइ छ ।
उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार निकै कठिन अवस्थामा उनको उपचार गरिएको थियो । उपचारका क्रममा उनलाई दुई पटकसम्म विद्युतीय झट्कासमेत दिइएको चिकित्सकले जनाएका छन् ।
उनको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको बताइएको छ । यति गम्भीर अवस्थामा समेत उनले यात्रुलाई सुरक्षित रुपमा अवतरण गराएकोमा चिकित्सकहरु चकित भएका छन् ।
चीन र पाकिस्तानी अधिकारीबीच आर्थिक मार्गबारे छलफल
ट्रम्पलाई कमजोर मूल्यांकन नगर्न चीनलाई चेतावनी
पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफ शुक्रबार स्वदेश फर्किंदै, उहाँलाई पक्राउ गर्ने तयारी
विश्व कप फुटबल हेर्न जानेलाई निशुल्क यातायात सेवा
छोरीका स्तनबाट अमेरिकी राष्ट्रपति ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ चिन्तित
अष्ट्रेलियाली क्रिकेटको मुख्य प्रशिक्षकमा ल्याङ्गर नियुक्त